musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Germany Kuputsa Nhau » Jekiseni:
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Supermarket muHesse, Germany yakapihwa mvumo yekurambidza vasina kuvharirwa kodzero yekutenga chikafu nezvimwe zvakakosha.
Pasi pemutemo mutsva, zvitoro muHesse, Germany inogona kusarudza kuti ishandise here '2G mutemo'.
Pamusoro peiyo nyowani 2G sarudzo, vashandi vemuzvipatara vanoramba vasina kuvharirwa vanofanirwa kuongororwa Covid-19 kaviri pasvondo.
Hesse ndiyo yekutanga nyika yeGerman kubvumidza mutemo kuzvitoro zvezvitoro uye zvimwe zvitoro zvekutengesa.
Zvitoro muHesse, Jerimani vakapihwa mvumo yekuramba vasina kuvharirwa kodzero yekutenga chikafu nezvimwe zvakakosha, zvichiita kuti Hesse ive nyika yekutanga yeGerman kubvumidza mabhizinesi kuramba mukana usina kuvharirwa kunyangwe pazvinhu zvakakosha.
Hesse Gurukota-Mutungamiri Volker Bouffier
Mutemo mutsva unoisa muenzaniso unonetsa sezvo vavakidzani vayo vachirwira kuratidzira vachipesana nemvumo yekubaiwa nhomba yakasimbiswa zviri pamutemo nekanzuru yehurumende.
Pasi pemutemo mutsva, zvitoro zvinogona kusarudza kuti ishandise here '2G mutemo', zvinoreva kuti kubvumidza kupinda chete kune vakabaiwa uye vakadzoreredzwa ('geimpft' uye 'genesen' muchiGerman) kana iyo yakasarudzika '3G mutemo', inosanganisira avo vakaongororwa vasina hutachiona (getestet).
Hesse Gurukota-Mutungamiri Volker Bouffier akadaro achivimba kuti mutemo mutsva haushandiswe zvakanyanya, achitsanangura kuti: "Tinotarisira kuti sarudzo iyi ichangoshandiswa chete kune mamwe mazuva uye kuti mabhizinesi anoenderana nezvinodiwa zuva nezuva haazoishandisa."
“Dziviriro hurusa inopihwa nenjodzi. Uye zvakadaro hazvisi nyore, hazvina mabhureki uye zvakasununguka kuwana, "Herr Bouffier akadaro, achiona kuti zvivharo zvekuvhara nzvimbo uye zvemagariro zvicharamba zviripo kumabhizimusi akakundikana kutora mutemo wekuwedzera we2G.
Mukutsinhana nekubvuma vanhu vakabaiwa chete kana kupora, mabhizimusi e2G anotenderwa kurega kufambidzana kwevanhu uye maski mvumo - pamwe muyedzo wekutengeserana mushure memwedzi gumi nemasere yekufukidza kumeso.
Pamusoro peiyo nyowani 2G sarudzo, vashandi vemuzvipatara vanoramba vasina kubayiwa jekiseni vanofanirwa kuongororwa COVID-19 kaviri pasvondo, uye vadzidzi vachiri kudiwa kuti vazvigadzire vakagara mukirasi.
Nepo angangoita mamwe masere German nyika dzakavhura iyo 2G sarudzo yemamwe mabhizinesi senge mabhawa, maresitorendi, majimu, mabhaisikopo nemabhuremba, Hesse ndiye wekutanga kubvumidza mutemo kuzvitoro zvekutengesa nezvimwe zvitoro zvekutengesa.
Kunyangwe mamwe marudzi eEuropean akaita seItari neFrance vakaita zvido zvevachinjiki zvinorambidza vanhu vasina kubayiwa nhomba kushanda (Itari) kana kudya mumaresitorendi (France), vatungamiriri vazhinji vakamira pakupa mvumo chaiyo kune vagari vavo.
Nyika ye "Hesse" kuGerman inopa masimba kuzvitoro zvikuru kurambidza Uncaccinated - Prussian Society of America anoti:
Gunyana 17, 2021 pa 02: 52